Mitarika fitsangatsanganana am-pitandremana indray i Eropa
Home » Vaovao momba ny dia any Eropa » Mitarika fitsangatsanganana am-pitandremana indray i Eropa
Fepetra amin'ny dia, nampidirina ho valin'ny Covid-19 areti-mandringana, dia mamaina tsikelikely, mamela ny fizahan-tany hiverina amin'ny toerana maro izay tsy mitsaha-mitombo. Ny fikarohana farany nataon'ny Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) mampiseho fa 22% ny toerana rehetra maneran-tany (48 toerana) dia nanomboka nanamora ny famerana, ka i Eropa no mitarika ny lalana. Mandritra izany fotoana izany, 65% amin'ireo toeran-kaleha rehetra maneran-tany (toeran-tsoa 141) dia manohy nakatona tanteraka amin'ny sisintanin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Amin'ny maha masoivohom-pirenena misahana ny fizahan-tany an'ny Firenena Mikambana azy, ny UNWTO dia nanara-maso ny valin'ny areti-mandringana hatramin'ny nanombohan'ny krizy ankehitriny. Ity fanavaozana farany ity, andiany fahadimy amin'ny famerana fitsangatsanganana mifandraika amin'ny COVID-19: Famerenana eran-tany ho an'ny fizahan-tany, dia mampiseho fa miverina miadana tsikelikely io sehatra io, na dia miharihary aza izany famerenana izany any amin'ny faritra eran-tany.
Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO dia nilaza fa: "Ny famerenana indray ny fizahan-tany dia zava-dehibe tokoa - ho an'ny asa fivelomana, ho an'ny orinasa ary ho an'ny toekarem-pirenena. Ity topy topimaso farany momba ny famerana fitsangatsanganana an'izao tontolo izao izao dia mampiseho fa mitombo ny isan'ny toerana itodiana dia manomboka manamaivana ny fameperana natolotr'izy ireo ho valin'ny areti-mandringana COVID-19. Atao ao a tompon'andraikitra sy refesina fomba. Na izany aza, tsy vita io krizy io. UNWTO dia hanohy hiara-miasa amin'ireo fanjakana mpikambana eto amin'izao tontolo izao hanalefaka ny fiatraikan'ny areti-mifindra ary hahazoana antoka fa, rehefa tonga ny fotoana mety, ny fizahan-tany dia afaka manampy amin'ny fanarenana ny fahombiazana sy maharitra. "
Ny fitsangatsanganana iraisampirenena ao Eropa dia manomboka indray raha mbola mihidy ny faritra hafa
Raha ny filazan'ny UNWTO, hatramin'ny 15 Jona, ny 22% n'ny toerana rehetra (toerana 48) dia nanamaivana ny fameperana ny fivezivezena, avy amin'ny 3% fotsiny (7 ny toerana) tamin'ny 18 May. Ny tanjona izay nanamaivana ny fameperana ny dia ho an'ny mpizahatany dia:
Toeran-kaleha 37 any Eropa, ao anatin'izany ny 24 amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Schengen
Toerana 6 any Amerika, ao anatin'izany ireo firenena mandroso amin'ny Nosy kely 5
Toerana 3 any Azia sy Pasifika, ao anatin'izany ireo firenena mandroso amin'ny Nosy kely 2
Toerana 2 atsy Afrika
Amin'izay fotoana izay, ny Fameperana fitsangatsanganana mifandraika amin'ny COVID-19 Ny tatitra dia milaza mazava fa toerana maro no mitazona fomba fitandremana amin'ny fampiakarana na fanamaivanana ny famerana ny dia. Hatramin'ny 15 Jona, ny 24% amin'ireo toerana itodiana rehetra maneran-tany (toerana 51) dia efa nametra ny fameperana dia nandritra ny 19 herinandro ary 37% (toerana 80) nandritra ny 15 herinandro.
Raha atotaly dia 65% ny toeran-kaleha maneran-tany (toeran-tsoa 141) no manidy ny sisin-tany mihidy tanteraka. Any Afrika, ny tahan'ny toeran-tany misy sisintany mihidy hatrany amin'ireo mpizahatany mahatratra 85% izao. Any Amerika, 76% ny toeran-kaleha dia mitazona ny fanidiana ny sisintany feno, toy izany koa ny 67% amin'ireo toeran-tany any Azia sy Pasifika ary 92% ny toeran-kaleha any Moyen Orient. Any Eropa, ireo fanidiana ny sisin-tany feno ireo dia ahena ho 26% amin'ny toerana rehetra izao.